Gadza sikuruwa: chii icho uye mashandisiro | Mahara emahara
Gadza sikuruwa: chii zvazviri uye mashandisiro
Kune zvakawanda zve screw mhando pamusika, vamwe vanozivikanwa uye vamwe vangangoita vekunze vanokosha kune mamwe maficha ekushandisa. Imwe yemhando idzi ndiyo inonzi set screw, yatinoisa ino chinyorwa kutsanangura zvese zvaunoda kuti uzive nezve izvi zvakasiyana uye kuti zvingakubatsira sei neako Zvirongwa zve DIY.
El seta sikuruwa Iyo chaiyo chaiyo mhando yesikuru iyo inoshandiswa mune mamwe maitiro anoshanda awakanyatsoona pane imwe nguva. Semuenzaniso, chinhu chekutanga chinouya mupfungwa zvino mabhakoni kana mwenje yemumugwagwa, uko kwaanowanzo shandiswa kubata zvimwe zvikamu zvemarambi aya kana abviswa ...
Kusiyanisa pakati pebhaudhi uye sikuruu hachisi chinhu chiri nyore kune vakawanda. Musiyano uripo pakati pezviviri unogona kuvhiringidza, asi mutsauko mukuru urimo mune tambo uye saizi. Bolts inowanzo kuve yakakura uye isina mugumo wakanongedzwa. Izvo zvipenga zvidiki uye zvakanongedzwa.
1 Chii chinonzi set screw?
2 Screw mhando
2.1 Maererano nemusoro
2.2 Zvinoenderana nechinhu che screw
2.3 Zvinoenderana nekupedzisa
2.4 Zvinoenderana nebasa
Chii chinonzi set screw?
Un seta sikuruwa Iyo inongova sirinda yesimbi kana tsvimbo yakasungirirwa iyo ine tambo yakanyorwa muhurefu hwayo hwose. Ndokunge, haina musoro sekunge nezvimwe screws. Musiyano chete pakati pemagumo acho ndewekuti mumwe wawo unonzi mudzi uye unozomisikidzwa mugomba rakamisikidzwa uye mumwe mugumo unowanzove negoridhe rakanyorwa kuti riwane sikurudhiraivha (inogona zvakare kunge iri kiyi yeAllen) yekukora kana kusunungura .
Kubatsira kwerudzi urwu rweguru kunowanzo kuve chikamu kugadzirisa uye kumisikidza yezvimwe zvinhu zvakagadziriswa muzvinhu zvinobviswa. Semuenzaniso, fungidzira chikamu chechubhu inoenda mune imwe chubhu. Iyo chubhu yekunze ine maburi akasungirirwa mukati mayo ma screws aya anogona kuiswa kuti aise kumanikidza kutenderedza chubhu yemukati, nekudaro achiibata munzvimbo yayo.
Musiyano uripo pakati peseti sikuru uye yetsika inogara kunyanya mune yayo physiognomy uye masimba kwainoiswa. Mune yechinyakare, zvirokwazvo waona kuti uri kurova zvishoma nezvishoma, asi musoro wayo (kunyanya kana wakagadzirwa nendarira, aluminium kana imwe alloy yakapfava, uye kunyanya kana mamwe mabhora achishandiswa pasina kudzora) anogona kudzikira nekuda kwesimba raitwa . Izvo zvinoita kuti zvikwanise kutora kana kuramba uchimanikidza ...
Muchikamu chakamisikidzwa, chikamu chinoitirwa musuwo chakanyatsobatanidzwa mune sikuru yacho pachayo, isina musoro. Naizvozvo, ndizvo chete kungoiswa pasi pekutakwa. Uye zvakare, ivo vanowanzo kuve vakagadzirwa nesimbi yekudzivirira kukuru.
Kune dzakawanda mhando dze screws Kupfuura iyo yakatarwa sikuruu, uye inogona kuiswa muchimiro zvinoenderana nezvinhu zvakasiyana ...
Maererano ne chimiro chemusoro pane iyo screw pane:
Hexagonal: Iyo yakajairika uye inowanzo shandiswa kumisikidza kana kusimudzira kwekumanikidza zvikamu. Ivo zvakare vanowanzove ne nut. Uye kwete ese iwo anogona kumanikidzwa uchishandisa socket kana wrench, mamwe zvakare anosanganisira screwdriver kubata. Semuenzaniso, iyo hex flange sikuruu kazhinji ine nyeredzi musoro, uye mukana wayo mukuru ndeyekuti haidi washer.
Slotted musoro: ndiwo akajairika, ayo anotendera kushandiswa kwe screwdriver. Kune ivo vane gorofa rakadzika, muchinjikwa, nezvimwe. Iwo akakodzera kana iko kusimbisa kukuru kusingadiwe, senge nezvinhu zvemuti. Chero zvazvingaitika, musoro unoramba uri kunze, kunyangwe kana pakaverengwa pakaunda inogona kuvanzwa.
Musoro wekwere: hadzisi kazhinji seidzo dzakapfuura. Ivo anoshandiswa mune zviitiko panodiwa kusimbisa kukuru senge hexagonal iwo. Semuenzaniso, yekugadzirisa maturusi ekucheka kana kutamisa zvikamu zvemimwe michina.
Cylindrical kana denderedzwa musoro: vanowanzove nehexagon mukati kuisa kiyi yeAllen kana imwe mhando. Iyo inoshandiswa mumajoini ayo anoda kukwirira kwakasimba nekusunga. Ini ndinotora uyu mukana kutsanangura mhando dzemusoro:
Flat- Ivo vane slot imwe chete mumisoro yavo yerudzi rweiyi flat screwdriver.
Nyeredzi kana kuyambuka: ndidzo dzinonzi mhando dzePhillips.
Chirima (Pz): yakafanana chaizvo neiyo yapfuura, asi ine muchinjikwa wakadzika uye chimwe chiratidzo chepamusoro chinopa chitarisiko cheasteris.
torx- Izvi hazviwanzo, asi zvinogona kushandiswa mune mamwe mapango ekushandisa, nezvimwe. Musoro waro une zororo risingawanzoite kunge nyeredzi.
vamwe: kune zvimwe zvakaita segirazi kana mukombe, Robertson, Tri-Wing, Torq-Setm, Spanner, nezvimwe.
Butterfly: sekuratidzwa kwezita rayo rine mhando yenzungu ine "mapapiro" muchimiro cheguruguru kuti igone kuomesa nemaoko ako. Kune zviitiko apo yakawandisa torque isingadiwe uye iyo inoda kuiswa uye kubviswa kazhinji.
Zvinoenderana nechinhu che screw
Kune rimwe divi, kana iyo sikuruwa zvinhu Tine:
Yealuminium: haina kunyanyopokana nekuedza, asi inopokana nemamiriro ekunze uye nechiedza. Yakanakira mapurasitiki nehuni.
Duralumin: zvakagadzirwa nealuminium pamwe nezvimwe simbi senge chromium. Vanowedzera kusimba kwayo.
Simbi: inowanzo kunge isina simbi, uye yakasimba kwazvo.
PlastikiIzvo zvisingawanzoitika, asi kune mamwe anomiririra yakanyanyisa mamiriro emanyoro, senge pombi dzemvura.
Brass: Vane ruvara rwegoridhe uye zvakajairika kushandiswa nehuni. Ivo vakasimba, asi vasina kusimba senge dzesimbi.
Aya screws anogona zvakare kuva nawo akasiyana magumo:
Cadmium: vane chitarisiko chesirivheri, vane kusagadzikana kwakanaka kune akasiyana mamiriro uye kana ikaita oxidize haina kuburitsa ne-zvigadzirwa zvengura.
Kwakakurudzira: bhavhu rezinc rinoshandiswa uye zvakare riine kutaridzika kwesilvery, kunyangwe iwo chaiwo matinji ezinc anogona kucherechedzwa. Iyo inodzivisa mushe kune mamiriro engura.
Tropicalized: vane iridescent yero hue. Inowanikwa neakakurudzira uye chrome kupera. Izvi zvinowedzera kuwedzera kusagadzikana kwehurosi.
Nickel yakafukidzwa: Ane kupenya kwegoridhe kupedzisa nekutenda kunickel kupera. Inowanzo shandiswa mukushongedza magumo.
Brass yakafukidzwa- Brass inoshandiswa uye ine inopenya simbi chitarisiko cheimwe yekushongedza magumo uye ngura kuramba.
Phosphatized: ivo vanogezwa mu phosphoric acid nekunyudzwa uye izvo zvinovapa iwo muto mutsvuku chitarisiko.
Bluing: ivo vari semi-glossy ine yakadzika nhema nhema. Ivo vanoiswa mukati mekudzora oxidation yesimbi iyo inogadzira iyo dema dema iyo inoita kuti vanyanye kuramba kurwisa.
YakapendwaMamwe akapendwa kuti awedzere kushongedza, semuenzaniso masikuru matema anoshandiswa neimwe fenicha yematanda.
Maererano ne basa racho yeiyo screws inogona zvakare kuverengerwa mu:
Kuzvibata wega uye kuzvicheka-chega- Inoshandiswa kune sheet sheet uye hardwood. Ivo vakapinza uye vanokwanisa kutema yavo yega nzira kuburikidza nezvinyorwa.
Shinda yehuni: kusiyana neidzo dzakapfuura, ivo havana tambo yakavezwa pamwe nehurefu hwayo hwese, asi zvirinani vane chikamu cheguru chisina kushanda. Iwo ndiwo akajairwa lag screw yehuni uko tambo inongori 3/4 yeiyo screw. Ivo zvakare vane yakapinza tip uye vanogona kutema yavo vega nzira.
Nenzungu: Ivo havana poindi, uye shandisa nati kujoinha zvikamu nekumanikidza kukuru. Inogona zvakare kushandiswa neiyo inosuka washer, nokudaro ichisimbisa pekugara kwenzungu nemisoro.
Seta sikuruwa kana zvihwitsi: (iyo yakatsanangurwa pamusoro)
Inviolable: Iyo mhando yesikuru yekuchengetedza mafomu ayo akaiswa mukati uye hazvibviri kubvisa. Iwe unogona chete kumanikidza chikamu kuti chiputse. Iyo inoshandiswa kune zvikamu zvakafumurwa kuruzhinji, zvichidzivirira kuti zvisashandiswe.
vamwe: ivo vanogona zvakare kuverengerwa kune epamusoro ekunyatso kunyorera, yakanyanya kuramba (ivo vanoiswa nemavambo TR mumusoro), nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » 3D kudhinda » Gadza sikuruwa: chii zvazviri uye mashandisiro
DXF: zvaunofanira kuziva nezve iyi fomati fomati
Linear actuator yeArduino: mechatronics yemapurojekiti ako